Iindaba - Malunga nokulungiswa kwamazinyo angenanto
Ukulungiswa kwamazinyoyaqalwa yiJamani. Abavelisi bezithuthi abaninzi basebenzise itekhnoloji efanayo ukulungisa izithuthi ezonakalisiweyo ngexesha lokuhlolwa kwefektri. Amagqabantshintshi angenakuphepheka kwinkqubo yokusebenzisa imoto. Ngothotho lwee-crowbars ezinobuchule kunye nezixhobo zokutsala, amagcisa anezakhono afuna kuphela iyure enye okanye ezimbini ukulungisa i-dent ebusweni bomzimba wemoto, ngaphandle komkhondo. Ngoncedo lwexesha elifutshane kunye neendleko eziphantsi, obu buchwephesha buya buxhaphaka ngakumbi kuninzi lwabanini bemoto.
Nangona kunjalo, iteknoloji yokulungisa i-dent yeemoto ayinamandla onke. Kukhawulelwe kuphela kumacandelo ngaphandle komonakalo wepeyinti. Izithuthi ezenziwe ngentsimbi kunye nealuminium zinokulungiswa. Ngoku abanye abavelisi beemoto bathathe indawo yentsimbi kunye nealuminium ngeplastiki eqinileyo ukonga iindleko. Ke akukho nto inokwenziwa yile teknoloji.
Obu buchwephesha bunciphisa kakhulu ixesha lokulungisa (malunga nemizuzu engama-20 ukuya kwengama-40 yokulungiswa kwesifotho), kwaye kunciphisa kakhulu iindleko (malunga neepesenti ezingama-50 zephepha lesinyithi kunye nepeyinti yesitshizi). Kwaye indawo etshisiweyo elungiswe yile teknoloji ayinakuze ikhubazeke kwaye iphele, isenza ngokupheleleyo isithuthi kwakhona sibonise isitayile saso sokuqala. Spray ukupeyinta itekhnoloji yokulungisa i-dent inokubuyisela indawo yoqobo, ikhawuleze ilungise isifotho, isindise inkathazo yeinshurensi kunye neendleko zeshiti. Ziindaba ezimnandi kuninzi lwabanini bemoto. Nangona kunjalo, kuba inokulungisa kuphela isifotho, umonakalo wepeyinti awunakulungiswa.